အကောင်းဆုံးစျေးသက်သာသော လက်ပ်တော့များ - ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား ကယ်တင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
€ 500 ထက်လျော့နည်း
€ 1000 ထက်လျော့နည်း
ယူရို 1000 အောက် ဂိမ်းကစားခြင်း။
ဘယ် Laptop ဝယ်ရမလဲ။
Ryzen5လက်ပ်တော့
Ryzen7လက်ပ်တော့
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးနှင့် စျေးနှုန်းတွင် အကောင်းဆုံးကို ရှာဖွေနိုင်စေရန် သီးခြားလက္ခဏာများအလိုက် စျေးသက်သာသော လက်ပ်တော့များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်။
စျေးပေါသော လက်ပ်တော့များအတွက် ယနေ့ လျှော့စျေးများ
ဈေးပေါတဲ့ လက်ပ်တော့တစ်လုံးဝယ်တာက ကားဝယ်တာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ သင့်အိမ်နီးနားချင်းအတွက် မှန်ကန်သောအရာသည် သင့်အတွက် သင့်လျော်မည်မဟုတ်သောကြောင့် သင်သည် သင်၏သုတေသနကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကြိမ်တွင် ကိုးကြိမ်မှာ ၎င်းကိုအိမ်သို့မယူဆောင်မီ “လှည့်ပေး” ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘယ်မော်ဒယ်ကို လိုချင်လဲဆိုတာ မစဉ်းစားခင်မှာ သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ သင့်မှာရှိနေတဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။.
မင်းရဲ့စိတ်သက်သာရာရဖို့အတွက်၊ ငါတို့ဟာ အလုပ်ရဲ့အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကို ဒီဆောင်းပါးမှာ စုစည်းပြီး လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အကောင်းဆုံးစျေးသက်သာသောလက်ပ်တော့များ. ကျွန်ုပ်တို့တွင် လိုအပ်မှုတိုင်းအတွက် မော်ဒယ်တစ်ခုပါရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် သင်မည်သို့အသုံးပြုမည်ဆိုပါက သင့်အတွက် စံနမူနာဖြစ်မှာ သေချာပါသည်။
HP က 15s-eq2117ns -...
မည်သည့်စျေးသက်သာသော Laptop ကိုလိုချင်သည်ကို သင်မသိသေးပါက၊ သင်ရှာဖွေနေသော အင်္ဂါရပ်များအပေါ်အခြေခံ၍ သင်ရွေးချယ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဝယ်ယူမှုလမ်းညွှန်များ အောက်တွင် အတွဲလိုက်ရှိပါသည်။
ယူရို 1000 အောက် ဂိမ်းလက်ပ်တော့
ယူရို 1000 ထက်နည်းသော လက်ပ်တော့များ
ယူရို 500 ထက်နည်းသော လက်ပ်တော့များ
Linux လက်တော့ပ်။ ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲ။
SSD ပါသော လက်ပ်တော့များ
2-in-1 ပြောင်းသုံးနိုင်သော လက်ပ်တော့များ
စျေးပေါသော Ultrabook များ
အကောင်းဆုံး Laptop အမှတ်တံဆိပ်များ
Toshiba Dynabook မှတ်စုစာအုပ်
လက်ပ်တော့ကို ပေးချင်တာ သုံးရတာ အလိုက်
ယူရို 500 နှင့် €1.000 ဘတ်ဂျက်ဖြင့်၊ ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်သည် သင့်လိုအပ်ချက်အရ ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
ဝယ်ရမယ့် အတန်းမရှိရင် ငါတို့က မင်းကို တစ်မျိုးလုပ်ထားတယ်။ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် ဒါကြောင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် ဘာဝယ်ဖို့လက်တော့ပ် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
2021 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးစျေးသက်သာသော လက်ပ်တော့များ
ကောင်းပြီ၊ နောက်ထပ်မသဲကွဲဘဲ၊ 2021 ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးစျေးသက်သာတဲ့ လက်ပ်တော့တွေနဲ့ စလိုက်ရအောင်။ စာရင်းပြုလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးနှုန်းသာမက ဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။ နှင့် အခြားရှုထောင့်များစွာ။
ဤမော်ဒယ်သည် သေချာပေါက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သောကြောင့် အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိထားသော ကမ်းလှမ်းမှုကြီးကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က ၎င်းကို ဦးစွာတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပါးလွှာပြီး အသံတိတ်မှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်သည်။. ကျောင်းသားများနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက် ဒုတိယလက်တော့ပ်အဖြစ် သို့မဟုတ် အလုပ်လက်တော့ပ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ပေးချေသည့်အရာကို သင်ရရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် မြန်နှုန်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်မှုကို မမျှော်လင့်ဘဲ ပိုကောင်းသည်။ သို့သော်၊ ဤစာရင်းတွင်စျေးအသက်သာဆုံးလက်ပ်တော့ဖြစ်လင့်ကစား၊ ၎င်းသည်တော်တော်လေးအထင်ကြီးစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။
အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးမှာ 64 GB ဖြစ်သည်။ဤစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောလက်ပ်တော့အများစုမှာမရှိသောကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် CHUWI HeroBook အကြောင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ Chromebook အတွက် Microsoft ၏ အဖြေကဲ့သို့ပင်။ အကယ်၍ သင်သည် Chrome ၏လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်မလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး Windows 10 ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပါက၊ ၎င်းသည် Microsoft မှအကောင်းဆုံးစျေးပေါသောလက်ပ်တော့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီကွန်ပျူတာ ပေါ့ပါးပြီး နေ့စဥ်အသုံးပြုရန်အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။- အင်တာနက်သုံးပါ၊ Microsoft Office (ထိုကဲ့သို့သော Word နှင့် Excel ကဲ့သို့) ကိုသုံးပါ၊ လူမှုကွန်ရက်များကို ထိန်းချုပ်ပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ၊ တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုပါ ...)
၎င်းသည် ဤစာရင်းတွင် ဈေးအသက်သာဆုံး လက်ပ်တော့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် အစွမ်းထက်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ နေ့စဥ်အသုံးပြုမှုအတွက် သင့်အား ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ တာရှည်ခံသောဘက်ထရီ၊ လုပ်ဆောင်မှုမြန်ဆန်သည်။ ရိုးရှင်းသော ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပင် သင်ကစားနိုင်သည် (ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်အတွက် ၎င်းသည် တိုတောင်းသော်လည်း ကလေးအတွက် လက်ပ်တော့တစ်လုံးရှာနေပါက၊ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ကို ယုံကြည်ပါ)။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံ၊ ဤလက်ပ်တော့၏အဓိကအားနည်းချက်မှာ၎င်းတွင် DVD drive မရှိပါ။. သို့သော်၊ ၎င်းသည် ဤစျေးနှုန်းအကွာအဝေးရှိ လက်ပ်တော့များအတွက် စံတစ်ခုဖြစ်လာသည်၊ ထို့ကြောင့် Microsoft Office ကဲ့သို့သော သင်လိုအပ်မည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အများစုကို ဒေါင်းလုဒ်တစ်ခုအဖြစ် ဝယ်ယူနိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို မပိတ်လိုက်ပါနှင့်။ ဒါက တကယ်ပဲ သင့်အတွက် အဆင်မပြေဖြစ်နေပေမယ့်၊ ပြင်ပ DVD Drive တစ်ခုကို ယူရို 30 အောက်နဲ့ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုမှတပါး၊ ၎င်း၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၊ ၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်အထက်ဖော်ပြပါဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာ တင်းကျပ်သောဘတ်ဂျက်များအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော လက်ပ်တော့တစ်လုံးဖြစ်သည်။
ASUS Vivobook ၅ လက်မ HD
Asus VivoBook ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤစာရင်းတွင် နေ့စဥ်အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံးစျေးပေါသော လက်ပ်တော့များထဲမှတစ်ခု။ ၎င်းသည် Amazon တွင် အရောင်းရဆုံးဖြစ်လာပြီး ၎င်း၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးရှိ အခြားသော လက်ပ်တော့များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။
ယခင်စာရင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများသည် အလုံးစုံသော မြေပြင်လက်ပ်တော့တစ်လုံးအတွက် ပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အဘယ်အရာက ဤမျှထူးခြားသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ Asus သည် ငွေနှင့်မယှဉ်နိုင်သော တန်ဖိုးနှင့် HD မျက်နှာပြင်ကို ပေးဆောင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပေါင်းစည်းထားသောဂရပ်ဖစ်ကဒ် Intel HD Graphics 620 နှင့် v2 Dolby Advanced Audio သည် သင်မျှော်လင့်ထားသည့် အရည်အသွေးအားလုံးဖြင့် TV သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဒါက Laptop အမျိုးအစားပါ။ အလုပ်နှင့် မာလ်တီမီဒီယာအတွက် နှစ်မျိုးလုံးသုံးနိုင်သည်။. ၎င်းသည် အသေးငယ်ဆုံးမဟုတ်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူဆုံးမဟုတ်သော်လည်း၊ အိမ်မှ အပြင်သို့ သယ်ဆောင်ရန်၊ အိမ်မှ အပြင်သို့ ယူဆောင်ရန်၊ ၎င်းကို Windows 10 ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော ဗီဒီယိုဂိမ်းများ ကစားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် အတည်ပြုပါတယ်။ စျေးကွက်တွင်ဤစျေးနှုန်းအကွာအဝေးရှိအကောင်းဆုံးလက်ပ်တော့များထဲမှတစ်ခု.
HP က 14
ဤလက်ပ်တော့သည် အခြားအကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများထက် အနည်းငယ်စျေးသက်သာပါသည်။သို့သော် အခြားဘတ်ဂျက်လက်တော့ပ်လမ်းညွှန်များတွင် ၎င်းကို PC Advisor ၏ 2021 ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးတတ်နိုင်သောလက်ပ်တော့များစာရင်းတွင်ပထမအဆင့်တွင်ပင်အဆင့်ရောက်နေသောကြောင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါဆို ဒီအပိုငွေပေးရတာ ထိုက်တန်သလား ဒါမှမဟုတ် ဒီမော်ဒယ်နဲ့ ထိုက်တန်သလား။
HP 14 ပါ၀င်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ 2021 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး ဘတ်ဂျက်သုံးနိုင်သော လက်ပ်တော့များစာရင်းတွင် သင်ပစ်သမျှ (အုတ်မှလွဲ၍) နှင့် အနည်းငယ်ပိုယူနိုင်သည်။.
၎င်းသည် Microsoft Office ကဲ့သို့သော အခြေခံအလုပ်လျှောက်လွှာများ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ဝဘ်ရှာဖွေခြင်း၊ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပင် ကစားနိုင်စေသည် (၎င်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အနည်းငယ်နှေးကွေးပြီး၊ ဂရပ်ဖစ်များသည် အလယ်အလတ်-အနိမ့်ပိုင်း အရည်အသွေးရှိသည်။)
ဒါတွေအားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားပါတယ်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးရှိအကောင်းဆုံးလက်ပ်တော့များထဲမှတစ်ခုယူရို 300 ထက်နည်းသောကြောင့် သင်ရနိုင်သည်။
ဤစာရင်းတွင် Lenovo Ideapad ရှိနေခြင်းသည် အနည်းငယ်ထူးဆန်းပါသည်။ ဒီမှတ်စုစာအုပ်မှာ တစ်ခုရှိတယ်။ rotary LED ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ Full HD (1920 x 1080). ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် YouTube ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်တစ်ခုခုကို သက်တောင့်သက်သာကြည့်ရှုလိုပါက ကြည့်ရှုခြင်းမုဒ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
တစ်ခုဖြစ်သည် စာရင်းတွင်အကောင်းဆုံး processor ရှိသည်။ထို့ကြောင့် သင်သည် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှာဖွေပြီး 2-in-1 convertible laptop ကိုနှစ်သက်ပါက ၎င်းသည် သေချာပေါက်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Lenovo Yoga သည် အခြားသော လက်ပ်တော့များထက် အနည်းငယ် ပေါ့ပါးသော်လည်း ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးသပ်ထားသော Chromebook များနှင့် မကိုက်ညီနိုင်သေးပါ။ ၎င်းသည်ယခင်စာပိုဒ်များတွင်ဖော်ပြထားသောလက်ပ်တော့များထက်ပိုမိုအားကောင်းပြီးခေါက်ထားသောစခရင်သည်အနည်းငယ်အတုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်အလုပ်လုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ. အခြေခံအားဖြင့်ဤမော်ဒယ် Packard Bell EasyNote နှင့် တူညီသော အသုံးဝင်မှု ရှိသော်လည်း သာလွန်သော အင်္ဂါရပ်များ ရှိသည်။.
သူတို့ရဲ့ အသုံးပြုမှုအလိုက် အကောင်းဆုံး ဈေးသက်သာတဲ့ Laptop တွေပါ။
15,6" HD မျက်နှာပြင် 1366x768 ပစ်ဇယ်
AMD A6-9225 ပရိုဆက်ဆာ၊ DualCore 2.6GHz မှ 3GHz အထိ၊ 1MB
4GB RAM၊ DDR4-2133
Seventh Generation INTEL CORE.I5 Dual-Core ပရိုဆက်ဆာ
တောက်ပသော retina မျက်နှာပြင်
INTEL IRIS PLUS ဂရပ်ဖစ် ၆၄၀ ဂရပ်ဖစ်
LG ဂရမ် 17Z990-V -...
အလေးချိန် 1340 ဂရမ်သာရှိပြီး ဘက်ထရီ သက်တမ်း 19.5 နာရီအထိ ခံနိုင်သော LG ဂရမ်သည် လူကြိုက်အများဆုံး 17" လက်ပ်တော့ ဖြစ်သည်။
ပိုမိုချောမွေ့သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Windows 10 Home Edition (64bit RS3)
တိုးချဲ့နိုင်သော မမ်မိုရီ၊ 512 GB SSD သည်2TB အထိ ချဲ့ထွင်ရန် နောက်ထပ်အပေါက်ပါသည့် စံအဖြစ်၊ 8GB RAM မမ်မိုရီပါရှိ...
၁၃.၅ လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင် (12.3x2736 pixels)
Intel Core i5-1035G4 ပရိုဆက်ဆာ၊ 1.1GHz
Lenovo ယောဂ 530-14ARR
၁၄ လက်မဖန်သားပြင်၊ FullHD 14x1920 pixels IPS
AMD Ryzen52500U ပရိုဆက်ဆာ၊ Quadcore 2.5GHz အထိ 3.4GHz
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း လက်ပ်တော့များအတွက် ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပြီးနောက်၊ သင်သည် ပိုမိုတိကျသည့်အရာတစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားပေမည်။ ဤကိစ္စတွင် သင်စိတ်မပူပါနှင့်၊ သင့်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေမည့် နှိုင်းယှဉ်ချက်များစွာရှိသည်။
Laptop အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း. အချို့သော မော်ဒယ်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းကို နှိုင်းယှဥ်၍ အနည်းငယ် ပိုမိုပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ်ချက်။ သင့်ငွေထဲက အကောင်းဆုံးရချင်ရင် စဉ်းစားပါ။
ဂိမ်းလက်တော့ပ်များ. ဂိမ်းဆော့ဖို့ Laptop ဝယ်ချင်သူများအတွက်။ ဂရပ်ဖစ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အများဆုံးရနိုင်စေရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စျေးနှုန်းနှစ်မျိုးလုံးတွင် ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
အကောင်းဆုံး Laptop အမှတ်တံဆိပ်များ. ဤနေရာတွင် ပါ၀င်သော အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးကို သိပြီး ထို့ကြောင့် သင်တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့က တရုတ်တွေမဟုတ်ဘူး။. ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များကို လိုချင်ပါက ပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်ယုံကြည်နိုင်သည့် အမှတ်တံဆိပ်များအကြောင်း ပြီးပြည့်စုံသောအမြင်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် နှိုင်းယှဉ်ထားသည့်အတိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ စျေးပေါတဲ့ laptop.
Windows 10 ကြီးကြီးမားမား ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ၊ လက်ပ်တော့များသည် တစ်ဖန်ပြန်လည်မြင့်တက်လာသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဒီအောင်မြင်မှုရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက် မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ဟာ Ultrabooks တွေရဲ့ လူကြိုက်များလာမှုနဲ့ လက်ပ်တော့တစ်လုံးနဲ့ တက်ဘလက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ two-in-one hybrid တွေ တိုးပွားလာမှုကိုလည်း လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ HP Pavilion x2 ကဲ့သို့သော မော်ဒယ်များကြောင့် စျေးသက်သာသော လက်ပ်တော့များသည် Chromebook များထက် သာလွန်နေပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ဂိမ်းကစားရန် လုံလောက်သော ပါဝါရှိသော လက်ပ်တော့များသည် ၎င်းတို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကြီးထွားလာသည်ကို မြင်တွေ့ရပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop ကွန်ပျူတာများအတွက် အလွယ်တကူ အစားထိုးကောင်းများ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ထင်ရသည်။
ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသဖြင့် သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးလက်ပ်တော့ကို ရွေးချယ်ရန်မှာ ပို၍ခက်ခဲလာသည်။ထို့ကြောင့် ပထမဆုံးအနေဖြင့် သင်ဘာလုပ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်လိုအပ်ချက်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံး Laptop ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အလွယ်တကူ ရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါကို အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဤဝဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြည့်ပါ။.
လျင်မြန်သော boot time နှင့် ပေါ့ပါးသောကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ရွေ့လျားလိုသောကြောင့် အသုံးပြုသူများသည် Ultrabook ကိုနှစ်သက်ကြမည်မှာ သေချာပါသည်။. အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဂိမ်းကစားသူများသည် ၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုနေသော ဂရပ်ဖစ်နှင့် စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှု လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လက်ပ်တော့များကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပျော့ပြောင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် စက်ပစ္စည်းကို လိုအပ်သူများသည် two-in-one hybrid ကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
အစပိုင်းတွင်၊ ၎င်းသည် ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားပုံရသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ သင့်လိုအပ်သမျှ အကောင်းဆုံး လက်ပ်တော့တစ်လုံးကို ရှာဖွေရန် ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်။. သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လက်ပ်တော့တစ်လုံးရှိကြောင်း သင့်အားပြောပြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကို ယုံကြည်ပါ။ ဤလမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် သင်သည် ၎င်းကိုရှာဖွေရုံသာမက သင်၏ဝယ်ယူမှုကို 100% သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
လက်တော့ပ်များ နှိုင်းယှဉ်မှု- နောက်ဆုံးရလဒ်
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အကဲဖြတ်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော လက်ပ်တော့ ၁၀ လုံးအနက်မှ သုံးဦးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ဤလက်ပ်တော့ နှိုင်းယှဉ်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်သော မော်ဒယ်သုံးမျိုး ရှိပါသည်။
El ပထမအမျိုးအစားရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်၊ HP က Envy x360 de 13,3 လက်မ. ဤလက်ပ်တော့တွင် အားကောင်းသော Intel Core i7 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 256GB SSD ပါရှိသည် - 512 GB အထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် Windows 10 နှင့်အလုပ်လုပ်ပြီး ၉ နာရီနှင့် ၂၈ မိနစ်အထိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပြီး အလေးချိန် ၁.၃ ကီလိုဂရမ်သာရှိသည်။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု9x 28 pixels နှင့် 1,3 x 1920 အထိ ရွေ့လျားမှုရှိသည်။
13,3-လက်မအရွယ်အစားသည် ဈေးကွက်တွင်အကြီးဆုံးစခရင်မပါဝင်သော်လည်း ၎င်းသည် ၎င်း၏သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ HP Spectre x360 တွင် USB 3.0 အပေါက်သုံးခုပါရှိပြီး USB အရံများအားလုံးကို အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ ဤလက်ပ်တော့သည် SD နှင့် HDMI ကတ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် အွန်လိုင်းဖုန်း၊ စကားပြောခန်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအပြင် လူမှုမီဒီယာကို ပေးဆောင်သည်။
El ဒုတိယအမျိုးအစား Silver Award သည် စီးရီးဖြစ်သည်။ Dell Inspiron ၂၇ de 15 လက်မ. ဤမှတ်စုစာအုပ်၏ ပရိုဆက်ဆာအမြန်နှုန်းသည် ကောင်းမွန်သည်၊ ၎င်း၏အခြေခံပရိုဆက်ဆာဖြစ်သော Intel Core i3,1 ကဲ့သို့ 3Ghz သည် သင့်အား မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပေးသည်။ ဤလက်ပ်တော့၏ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအချက်မှာ သင်သည် မြင့်မားသောကြည်လင်ပြတ်သားသောဂရပ်ဖစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါက ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို AMD ဗီဒီယိုကတ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ 1.000 GB သိုလှောင်မှုပမာဏသည် ဟာ့ဒ်ဒရိုက်တွင် လုံလောက်ပြီး သင့်မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များအတွက် နေရာများစွာပေးသည်။
DELL EMC7V75G ၃၉.၆၂ စင်တီမီတာ...
လည်ပတ်မှုစနစ်၊ Windows 10 သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင်5နာရီနှင့် 45 မိနစ်အထိကြာရှည်ခံဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်၊ အမှန်တရားမှာဤရှုထောင့်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ Inspiron 5570 သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင်နိုင်သူထက် အနည်းငယ်ပိုလေးပြီး 2.2 ကီလိုဂရမ်ရှိပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ၎င်း၏ 15 လက်မမျက်နှာပြင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ HP Envy X360 ကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ Inspiron ကို အပူစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်သောအခါတွင် ၎င်း၏အောက်ခြေသည် ၃၇.၇ ဒီဂရီအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း သင့်ပေါင်ပေါ်တွင် ကိုင်ထားလျှင် အဆင်မပြေပါ။ အခြေခံစခရင် resolution သည် 37.7 x 1920 pixels ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကို ပိုမိုမြင့်မားသော resolution၊ 1080 x 3840 သို့ အဆင့်မြှင့်နိုင်သည် - သို့မဟုတ် တူညီသည်ဖြစ်စေ၊ 4K မျက်နှာပြင်. USB 3.0 ပေါက်နှစ်ခုနှင့် USB 2.0 အပေါက်တစ်ခုပါရှိသည်။
နောက်ဆုံးတွင် တတိယနေရာ နှင့် ကြေးတံဆိပ်ဆုကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ Acer ကဆွစ်ဖ်5de 14 လက်မ. ဤမော်ဒယ်တွင် ပရိုဆက်ဆာအမြန်နှုန်း 3,4GHz ရှိပြီး ဤအမျိုးအစားရှိ လက်ပ်တော့တစ်လုံးအတွက် အလွန်ကြီးမားသည်။ ၎င်း၏ အလုံးစုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် A- ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာသည် ပရိုဆက်ဆာသည် ဤ PC ကို တတိယနေရာတွင် ထားရှိသည့်အရာမဟုတ်ကြောင်း ပြသသည်။ အခြေခံမော်ဒယ်တွင် 256GB SSD ရှိပြီး ၎င်း၏လည်ပတ်မှုစနစ်မှာ Windows 10 ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ပျမ်းမျှဘက်ထရီသက်တမ်းသည်7နာရီနှင့် 36 မိနစ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်ထားသော လက်ပ်တော့များအတွက် ပျမ်းမျှအောက်ဖြစ်သည်။ အခြေခံစခရင် resolution သည် 1920 x 1080 pixels ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကို 2560 x 1440 သို့ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Acer Aspire Swift တွင် USB 3.0 ပေါက်နှစ်ခုနှင့် USB 2.0 ပေါက်တစ်ခုရှိသည်။
နှိုင်းယှဉ်မှုမှာ အထင်ရှားဆုံး မော်ဒယ်များ ဖြစ်သောကြောင့် မော်ဒယ်များ ၊ ယူရို ၁၀၀၀ ဝန်းကျင် ကုန်ကျသည်။. သင့်တွင်ပိုမိုတင်းကျပ်သောဘတ်ဂျက်ရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နှိုင်းယှဉ်မှုကိုကြည့်ပါ။ အရည်အသွေး-စျေးနှုန်းသင့်လက်ပ်တော့များ သို့မဟုတ်ငါတို့ စျေးပေါသောလက်ပ်တော့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စျေးအသက်သာဆုံးကိုရှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ပ်တော့ နှိုင်းယှဉ်မှုဖြင့် အပြီးသတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ ပါရှိသောကြောင့် ကဏ္ဍတစ်ခုစီကို အနည်းငယ် ပိုမိုချဲ့ထွင်လိုသည့် အခြေအနေတွင် လက်ပ်တော့ အမျိုးအစားများ မည်ကဲ့သို့ ကွဲပြားသည်ကို ဖော်ပြပါမည်။
အခြားအဓိကဝယ်ယူမှုများကဲ့သို့၊ လက်ပ်တော့တစ်လုံးဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာ နောက်ဆုံးယူရိုတိုင်းကို တွက်တယ်။. ၎င်းသည် နှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် အသုံးပြုနိုင်မည့် စက်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမချမီ အကောင်းဆုံးလက်ပ်တော့များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်က အလုပ်သွားလုပ်ရန် လက်ပ်တော့များ နှင့် အလုပ်လုပ်ရန် လက်ပ်တော့များသာ ရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့အစား၊ အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် ရွေးချယ်စရာများစွာ. အခြေခံများနှင့်စကြပါစို့။
ဤလက်ပ်တော့များသည် အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ပါးလွှာမှု၊ ပေါ့ပါးမှု၊ ပါဝါနှင့် အရွယ်အစားတို့နှင့် ကိုက်ညီသော ကိရိယာများ Apple ၏ 13-လက်မ MacBook Air နှင့် ယှဉ်ပြိုင်သည့် သစ္စာရှိ Windows လက်ပ်တော့ ထုတ်လုပ်သူများကို ကူညီရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် Intel processor မှ တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ထိုသို့သော Ultrabook လက်ပ်တော့တစ်လုံးကို ဈေးကွက်တင်ရန်အတွက် Intel မှသတ်မှတ်ထားသော တင်းကျပ်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပါးလွှာရမည်၊ ၎င်းသည် 20 လက်မ မျက်နှာပြင်များအတွက် 13.3 မီလီမီတာ သို့မဟုတ် 23 လက်မ သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော မျက်နှာပြင်များအတွက် 14 မီလီမီတာထက် ပိုထူရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် မြင့်မားသော ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဗီဒီယိုကို ဖွင့်နေပါက သို့မဟုတ် ရပ်နားထားလျှင် ကိုးနာရီအထိ ဘက်ထရီ သက်တမ်းရှိသင့်သည်။
ကြည့်ပါ ဦး စျေးပေါသော ultrabooks နှိုင်းယှဉ် ငါတို့မှာဘာရှိလဲ
Ultrabook သည် hibernation မှထွက်လာရန် သုံးစက္ကန့်ထက်ပို၍ ကြာနိုင်သည် ။ ဤလက်ပ်တော့များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ခိုင်မာသောပြည်နယ် ဟာ့ဒ်ဒရိုက်များနှင့် အသံအမိန့်စာများနှင့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ Ultrabooks များကို သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် $900 မှစတင်ကာ ဈေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားပါသည်။
ရလဒ်က တစ်ချို့ပါ။ အကောင်းဆုံး Apple လက်ပ်တော့များကို မနာလိုစရာမရှိသော အရည်အသွေးမြင့် လက်ပ်တော့များ။ Ultrabook များသည် Dell XPS2သို့မဟုတ် Asus Zenbook ကဲ့သို့ တာရှည်ဘက်ထရီ သက်တမ်းနှင့် ပြတ်သားသော မျက်နှာပြင်ပါရှိသော 13 စင်တီမီတာအထူရှိသော လက်ပ်တော့များဖြစ်သည်။
Lenovo Yoga (2021) သည် အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသော လက်ပ်တော့တစ်လုံးသာဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းအဆင့်မှာ လုံးဝကို တော်လှန်ပါတယ်။. 13,9-လက်မဘောင်တွင် 11-လက်မစခရင်ကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် သေးငယ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်သော်လည်း Lenovo သည် အဆုံးမရှိနီးပါးအစွန်းမပါဘဲ မော်နီတာတစ်လုံးကို ဖန်တီးခြင်း၏ အံ့ဖွယ်အမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Yoga 910 သည် အလွန်သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် အကြံပြုထားသော အလွန်အစွမ်းထက်ပြီး အကြမ်းခံသော လက်ပ်တော့လည်းဖြစ်သည်။ ဒါတွေအားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့က အကောင်းဆုံး Ultrabook လို့ မှတ်ယူပါတယ်။
ဂိမ်းလက်ပ်တော့တစ်လုံးသည် သင်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် - စစ်မှန်သောဗီဒီယိုဂိမ်းပရိသတ်များအတွက် PC ဖြစ်သည်။. အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Candy Crush သို့မဟုတ် Angry Birds များကို ကစားရာတွင် အသုံးမချကြသော်လည်း high-end ပရိုဆက်ဆာ၊ 8GB ​​မှ 16GB RAM၊ အနည်းဆုံး သိုလှောင်မှု 1 TB နှင့် ဂရပ်ဖစ်ကတ် လိုအပ်သည့် လေးလံသော PC ဂိမ်းများကို ကစားရန်အတွက် အထူးပြု၊ ၎င်းသည် အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းဆော့ရန် လက်ပ်တော့များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုစတုရန်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ တည်ဆောက်မှုသည် အခြားလက်ပ်တော့များထက် ပိုမိုကြံ့ခိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်သည် များသောအားဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မြင့်မားသည်။
ငါတို့ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ အကောင်းဆုံး ဂိမ်းလက်ပ်တော့များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။.
ဂိမ်းဆော့ရန် လက်ပ်တော့များ ပါးလွှာသည် သို့မဟုတ် ပေါ့ပါးရန် မလိုပါ။ပုံမှန်အားဖြင့် ကစားသမားများသည် desktop ကွန်ပျူတာအစား ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဂိမ်းလက်ပ်တော့တစ်လုံးသည် ဒက်စတော့ကွန်ပြူတာကဲ့သို့ တူညီသောဂိမ်းများကို ကစားနိုင်စေသော်လည်း အားသာချက်မှာ အခန်းတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုကို ရွေ့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်း၏အိမ်တွင် ကစားရန် လုံလောက်သော သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည့် အားသာချက်ရှိသည်။
မကြာသေးမီအချိန်များတွင်၊ ဂိမ်းလက်ပ်တော့များသည် ၎င်းတို့၏ desktop ပြိုင်ဘက်များနှင့် အမီလိုက်နိုင်ရန် မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုးတက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသဘောအရ၊ ဤဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် ယုတ္တိအရှိဆုံးကောက်ချက်မှာ gaming laptops များတွင် desktops အပိုင်းအစများကို စတင်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်ရသည်။ ဒီမော်ဒယ်က အရွယ်အစားပြည့် ဒက်စတော့ပရိုဆက်ဆာနှင့် ထိပ်တန်းမိုဘိုင်း GPU ပါရှိသော မယုံနိုင်လောက်အောင် အစွမ်းထက်သော 15,6 လက်မ လက်ပ်တော့ ရရှိနိုင် ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ကြီးမားသောလက်ပ်တော့တစ်လုံးဖြစ်လာမည်ဟု သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်း ဤအရာအားလုံးကို အလွန်သေးငယ်သောကိုယ်ထည်အဖြစ် ထုပ်ပိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများနှင့် အလုပ်အတွက် လက်တော့ပ်များ
လုပ်ငန်းသုံးလက်ပ်တော့များသည် အခြားဆောင်းပါးများတွင် ဆွေးနွေးထားသော သမားရိုးကျ ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက် လက်တော့ပ်များနှင့် ဆင်တူသော်လည်း၊ အရည်အသွေးမြင့်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုကြာရှည်ခံပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုပြည့်စုံသော အာမခံများဖြင့် ရောင်းချပါသည်။. သင့်လက်ပ်တော့သည် ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သောကြောင့် နှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်း လုပ်ငန်းအတွက် အစားထိုးရန် မလိုအပ်ပါ။
ဤလက်ပ်တော့အမျိုးအစားများသည် ကွန်ပြူတာ နှေးကွေးခြင်းမရှိဘဲ ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလွယ်တကူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သော quad-core ပရိုဆက်ဆာများဖြင့် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို စိတ်ထဲတွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤလက်ပ်တော့များတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် ကြီးမားသော ဂရပ်ဖစ်ကတ်များ မပါရှိသော်လည်း သင့်အလုပ်တွင် ဂရပ်ဖစ် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းများ ပါဝင်ပါက ၎င်းတို့ကို ထပ်ထည့်နိုင်သည်။
HP Pavilion 14-ce2014ns သည် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် MacBook Air ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်ကြောင့် ပိုမိုပါးလွှာ၊ ပေါ့ပါးပြီး ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဒါ့အပြင် ဒီလက်ပ်တော့တစ်လုံးလည်း ပါရှိပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကြည်လင်ပြတ်သားသော Full HD မျက်နှာပြင်၊ Intel Core i7 CPU နှင့် 1TB သိုလှောင်မှု HDD တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. သို့သော်၊ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးမှာ ကျောင်းသားဘတ်ဂျက်ရှိပါက ၎င်းကို ယူရို 800 ဝန်းကျင်ဖြင့် သင်ရရှိနိုင်သည်မှာ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အလုပ်အတွက် သီးသန့်နီးပါး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ အမည်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ဤထူထပ်သောမှတ်စုစာအုပ်များတွင် တစ်ခုတည်းသောအချက်ရှိသည်- ကုန်ထုတ်စွမ်းအား. ရောင်းချသူများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အဆိုပါယူနစ်များကို Nvidia Quadro စီးရီး သို့မဟုတ် AMD FirePro လိုင်းကဲ့သို့သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့် GPU များဖြင့် တပ်ဆင်ပေးသည်။
၎င်း၏ထူးခြားချက်များမှာaအခြား ဖျော်ဖြေရေး လက်တော့ပ်များထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော port များနှင့် အတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။. TrackPoint cursors နှင့် လက်ဗွေစကင်နာများကဲ့သို့ ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့် လုံခြုံရေးရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့ အမွေအနှစ်ထည့်သွင်းမှုများကို ဖော်ပြခြင်းမပြုရ။ ဥပမာအနေဖြင့် Lenovo ThinkPad X1 Carbon နှင့် HP ZBook 14 ကို ဖော်ပြနိုင်သည်။
Lenovo Ideapad 330 သည် ၎င်း၏ သိမ်မွေ့သော လှပမှုနှင့် အကြမ်းခံသော ဒီဇိုင်းကြောင့်၊ မိုဘိုင်းလ်အလုပ်ရုံမှ သင်လိုချင်သမျှအရာအားလုံးနီးပါးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက်၊ ကြာရှည်စွာ ဘက်ထရီ သက်တမ်းနှင့် ကြံ့ခိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
၎င်းသည် ယူရို 900 မှ ကုန်ကျသည်ဟု ယူဆပါက၊ ရုံးအပြင်ဘက်တွင် အလုပ်လုပ်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ပေးဆောင်ရမည့်အရာအားလုံးအတွက် အပိုပေးဆောင်ရကျိုးနပ်ပါသည်။
နှစ်ယောက်တွဲ လက်တော့ပ်များ (hybrids)
အကယ်၍ သင်သည် လက်ပ်တော့ကို တက်ဘလက်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသူထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် ဟိုက်ဘရစ်ကိရိယာသည် သင့်အတွက် စံပြဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ Microsoft ၏ Windows 8 ကို နှစ်မျိုးသုံး လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့် ဖွင့်ထားသည်။ဤစက်ပစ္စည်းများသည် လက်တော့ပ်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် တက်ဘလက်ပုံစံ ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် ကီးဘုတ်မှ ခွဲထုတ်လိုက်သောအခါ တက်ဘလက်ပုံစံဖြင့် တက်ဘလက်ပုံစံ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက် ဤမော်ဒယ်များကို စိတ်ဝင်စားပါက 2-in-1 convertible notebooks များ။
ဒါပေါ့, တက်ဘလက်နှင့် လက်တော့ပ်အဖြစ် နှစ်မျိုးလုံး အောင်မြင်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော ကိရိယာတစ်ခု ပေးရန် စိတ်ကူးဖြစ်သည်။အိမ်တဝိုက်မှာ ပစ္စည်းတွေ အများကြီးရှိမနေဖို့၊ ဤစက်ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်သို့ မိတ်ဆက်ခြင်းသည် မလွယ်ကူသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အလားအလာ၏ အတောက်ပဆုံး ဥပမာမှာ Microsoft ၏ Surface Pro3ဖြစ်သည်။
HP Spectre x360 13 သည် HP အမှတ်တံဆိပ်မှ ယနေ့အထိ အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့် စွယ်စုံသုံးကိရိယာတစ်ခုသာမက၊ စျေးကွက်တွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး hybrid လက်တော့ပ်. နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်၊ HP မှ ဟိုက်ဘရစ်တက်ဘလက်အသစ်သည် ပိုကြီးသောစခရင် သို့မဟုတ် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုပိုမြင့်ခြင်းကဲ့သို့သော သိသိသာသာ တိုးတက်မှုအချို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ HP Spectre ကို ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး အသုံးပြုရပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ပတ္တာ သို့မဟုတ် ကာဗာ ကဲ့သို့သော သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်းကိုမြင်သည်နှင့် ဂိမ်းဆော့သောလက်ပ်တော့တစ်လုံးကို သင်မှတ်မိလိမ့်မည်- ကြီးမားသောအရွယ်အစား၊ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မီးများ၊ စိမ်းလန်းသောပန်းချီကားများနှင့် ပရိသတ်များ တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသည်။ ရင်တောင်မှ Razer Blade သို့မဟုတ် MSI GS60 Ghost Pro ကဲ့သို့သော ပါးလွှာသော၊ ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပိုကြော့ရှင်းသော မော်ဒယ်များ၏ အသွင်အပြင်ကြောင့် ဤအလေ့အကျင့်သည် စတင်ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်သည်။.
ဝန်လေးသော ဒီ link သင့်တွင် ကစားရန် (ဂိမ်းဆော့ရန်) လက်ပ်တော့များပေါ်တွင် နှိုင်းယှဉ်ချက်အပြည့်အစုံရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ဂိမ်းဆော့သည့်လက်ပ်တော့များဖြစ်သည်။ Nvidia နှင့် AMD တို့မှနောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်း GPU များတပ်ဆင်ထားသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းတွေကို ကစားနိုင်တဲ့အပြင် desktop computer နဲ့ကစားရင် (ဒက်စတော့ကွန်ပျူတာကို တိုက်ရိုက်အစားထိုးနိုင်တဲ့ မော်ဒယ်အချို့ရှိပါတယ်)။
ဤနောက်ဆုံး Laptop အမျိုးအစားကို ခွဲခြားရန် ခက်ခဲသည်။ ၎င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များက ချမှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာဆဲဖြစ်သည့် လက်ပ်တော့တစ်လုံးဖြစ်သည့်အတွက် ပိုမိုသန့်စင်လာသော်လည်း၊ လက်ပ်တော့ဈေးကွက်က သူ့ဘာသာသူပေးသမျှကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဤအမျိုးအစားတွင်ရှိသော အမျိုးအစားများကို စျေးပေါသော သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်တန်းစား ကွန်ပျူတာများဟု ယူဆကြသည်။.
ဤလက်ပ်တော့များသည် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 11 မှ 17 လက်မအထိရှိကြပြီး ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ပုံမှန်အားဖြင့် ပလတ်စတစ်ဘူးခွံများအောက်တွင် ကပ်နေသောအင်္ဂါရပ်များစွာမရှိပါ။ သူတို့က ကွန်ပျူတာတွေ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ ဒါပေမယ့် မင်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ပိုတောင်းလာတဲ့အခါ လျော့သွားလိမ့်မယ်။ ငာဒါကိုယုံတယ် ဒီ infographic အရာအားလုံးကို ပိုမိုဂရပ်ဖစ်မြင်နိုင်ရန် အနည်းငယ်ကူညီပေးပါမည်။
2014 ခုနှစ်တွင် 13-လက်မ MacBook Pro သည် Apple မှထွက်ရှိဖူးသမျှလက်ပ်တော့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ 2021 မော်ဒယ်သည် တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပိုမြန်ပြီး ဘက်ထရီ သက်တမ်း ပိုကြာပါတယ်။. အတွင်းပိုင်းမွမ်းမံမှုအပြင် 2021 13-လက်မ MacBook Pro သည် အသစ်မိတ်ဆက်ထားသော Force Touch trackpad ကို အမွေဆက်ခံထားသည်။ Apple သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းသုံးအက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက် ထူးထူးခြားခြားမဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းပေးဆောင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ၎င်း၏အပ်ဒိတ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက Mac တစ်ခုရရှိခြင်းသည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
Chromebook များသည် ဈေးကွက်တွင် အသေးငယ်ဆုံးနှင့် အပေါ့ပါးဆုံး လက်ပ်တော့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် သမားရိုးကျ မှတ်စုစာအုပ်တွေရဲ့ ပါဝါနဲ့ သိုလှောင်နိုင်မှု အားနည်းပါတယ်။ Windows သို့မဟုတ် Macintosh လည်ပတ်မှုစနစ်အစား၊ Google ၏ Chromebook များသည် အင်တာနက်နှင့် အခြားအရာအနည်းငယ်ကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသည့် Google ၏ Chrome OS တွင် အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ hard drive သည် အလွန်သေးငယ်သည် - 16GB ဝန်းကျင် - မျက်နှာပြင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 11 လက်မရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် USB port တစ်ခုသာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြည့်စုံသော နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ Chromebook များသည် အကောင်းဆုံး လက်ပ်တော့အသေးများအဖြစ်.
သို့သော် ၎င်းတို့သည် သင့်အား သင်၏ hard drive တွင်အစား Google Drive တွင် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို သိမ်းဆည်းနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။. ၎င်း၏ မျက်နှာပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 1366 x 768 pixels ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်သုံး၍ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် အခါအားလျော်စွာ လုံလောက်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ချိတ်ဆက်မှုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် သင်သည် USB အစုအဝေးများကို အမြဲချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ရလဒ်မှာ Chromebooks များဖန်တီးရာတွင် အနိမ့်ဆုံး ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တင်းကျပ်သောဘတ်ဂျက်များအတွက်သို့မဟုတ်ကျောင်းသားများအတွက်စံပြ. ဟုတ်ပါတယ်၊ Chromebook များသည် ကြိုးမဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သည့်နေရာများတွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း Google သည် ၎င်း၏အော့ဖ်လိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မကြာသေးမီက မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သည်ကို စိတ်ကူးရရန် Dell Chromebook 11 သို့မဟုတ် Toshiba Chromebook တွင် သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Netbooks များသည် အလွန်သေးငယ်သည်၊ စျေးသက်သာပြီး ဝဘ်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အခြားအနည်းငယ်သာအတွက် အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် Netbooks များသည် Chromebook များနှင့် ဆင်တူသည်။ ဤမှတ်စုစာအုပ် ကွန်ပျူတာများတွင် DVD နှင့် CD များကိုဖွင့်ရန် optical drive မရှိပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Chromebook များနှင့်မတူဘဲ၊ netbooks များသည် များသောအားဖြင့် Windows လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ဖြစ်စေ နောက်ဆုံး သို့မဟုတ် အစောပိုင်းတွင် အသုံးပြုသူအများစုနှင့် ရင်းနှီးသည်။
နှိပ်လို့ရတယ်။ အကောင်းဆုံးစျေးပေါ netbook များကိုကြည့်ရှုရန် ဤနေရာတွင်.
ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များနှင့် ကီးဘုတ်များပါရှိသော netbook အများအပြားသည် လက်ပ်တော့များနှင့် တက်ဘလက်များကြားတွင် နယ်နိမိတ်တွင် ရှိနေသည်။ netbook သည် ဂိမ်းကစားရန် အပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ကောင်းမွန်သော်လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ဖြင့် စာရိုက်ခြင်းကို နှစ်သက်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သော laptop တစ်ခုဖြစ်သည်။
သေးသေးလား အကြီးလား ?
ဘာအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်တော့ပ်တွေပါ။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၁-၁၇ လက်မ အရွယ်အစားရှိသည်။. ဘယ်လက်ပ်တော့ကို ဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အလေးချိန်နဲ့ စခရင်ရဲ့ အရွယ်အစား- ဒီအချက်နှစ်ချက်အပေါ်မှာ အခြေခံသင့်တယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ သင့်လက်ပ်တော့စခရင်ရဲ့ အရွယ်အစားက သူပြသနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာပမာဏနဲ့ သူ့ရဲ့အရွယ်အစားကို တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်။ သို့သော် သတိပြုသင့်သည်မှာ၊ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလည်း တိုးလာသင့်သည်။ 1366 မှ 768 လက်မ လက်ပ်တော့များအတွက် သို့မဟုတ် 10 မှ 13 လက်မလက်ပ်တော့များအတွက် 1920 x 1080 ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 17 x 18 ထက်နည်းသည့်အရာကို လက်မခံသင့်ပါ။
ဒုတိယအနေနဲ့ အဲဒါကို မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်၏ လက်မတိုင်းအတွက်၊ လက်ပ်တော့၏အလေးချိန်သည် 0.45 ကီလိုခန့် တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။. ဟုတ်ပါတယ်၊ ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်၊ ဒီလမ်းကြောင်းကိုချိုးဖျက်တဲ့ပေါ့ပါးတဲ့မော်ဒယ်တွေရှိပါတယ်။ စျေးကွက်တွင် အပြတ်သားဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး မျက်နှာပြင်ကို သင်လိုချင်ကောင်း လိုချင်သော်လည်း ၎င်းကို သင့်ကျောပိုးအိတ်ထဲတွင် ဆောင်ထားရန် ဆန္ဒရှိပါသလား။
နည်းပညာ gadgets အများစုကဲ့သို့ပင်၊ လက်ပ်တော့များသည် သင်မလိုအပ်နိုင် သို့မဟုတ် မလိုအပ်နိုင်သည့် ပုံသေပုံစံဖြင့် အင်္ဂါရပ်များစွာပါရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အင်္ဂါရပ်များသည် သင့်လက်ပ်တော့ပ်ဝယ်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာများဖြစ်သည်။
USB က 3.0- ဤသည်မှာ USB ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်းနည်းပညာတွင် နောက်ဆုံးပေါ်စံဖြစ်သည်။ သင့်လက်ပ်တော့တွင် အနည်းဆုံး ဤအပေါက်များထဲမှ တစ်ခုကို သင့်လက်ပ်တော့နှင့် ဥပမာအားဖြင့် USB 3.0 flash drive အကြား ဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုများ ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် သေချာပါစေ။
802.11ac Wi-Fi- ယခုအချိန်အထိ 802.11n သည် အမြန်ဆန်ဆုံး ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် 802.11ac router များ ပေါ်လာခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင့်လက်ပ်တော့မှ ဗီဒီယိုများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် သို့မဟုတ် ဖိုင်အများအပြားနှင့် အကြောင်းအရာများစွာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါက၊ အဆိုပါ Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားနှင့် မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်ရန် အလေးအနက် စဉ်းစားသင့်သည်။
SD ကဒ်ဖတ်စက်- လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ရန်အတွက် စမတ်ဖုန်းကင်မရာ၏ ရေပန်းစားလာမှုနှင့်အတူ၊ လက်ပ်တော့ထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ မော်ဒယ်များမှ ဤအင်္ဂါရပ်ကို ဖယ်ရှားပစ်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်း သင်သည် ဓာတ်ပုံပညာကို ဝါသနာပါသူဖြစ်ပါက SD ကတ်ဖတ်သူကို လွတ်သွားနိုင်သည်။
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်လက်ပ်တော့တစ်လုံးရှိ touchscreen ၏အားသာချက်များသည် ယခုအချိန်တွင် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသော်လည်း အနာဂတ်တွင် မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် set ကိုပိုမိုစျေးကြီးစေနိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သောကြောင့်မဆုံးဖြတ်မီ၎င်းသည်အသုံးဝင်မည်ဆိုသည်ကိုကောင်းစွာအကဲဖြတ်ပါ။
မဝယ်ခင်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးရမယ့် မေးခွန်းတွေပါ။
ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံး Laptop ကိုဝယ်ဖို့ အလျင်စလိုမလုပ်ခင်မှာ သင့်ကိုယ်သင် အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို မေးသင့်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး Laptop အမျိုးအစားကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
Laptop ကို ဘာအတွက် အဓိက သုံးမလဲ။
အင်တာနက်အသုံးပြုရန်၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် မိသားစုနှင့် အခါအားလျော်စွာ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက၊ ယေဘူယျ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနှင့် သင့်တွင် အလုံအလောက်ရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။ ကစားရတာ ကြိုက်လား။ အဲဒီမှာ မင်းမှာ အဖြေရှိတယ်။ သင်အများကြီးရွေ့လျားပြီး ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ လက်ပ်တော့တစ်လုံး လိုအပ်ပါတယ်၊ Ultrabook ကို စမ်းကြည့်ပါ။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်းသည် သင့်အား လမ်းကြောင်းမှန်သို့ အမြဲညွှန်ပြနေမည်ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းကို သင်ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်လဲ။
လက်ပ်တော့ ပုံစံမျိုးစုံ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မော်ဒယ်များနှင့် အရွယ်အစားများ - ဆေးသုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ၏ အလွှာများကို ဖော်ပြခြင်းမပြုပါ။. သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်နေရတဲ့ လက်တော့ပ်တွေရဲ့ အကျည်းတန်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ရင် အလူမီနီယမ်ကာဗာပါတဲ့ ကွန်ပျူတာ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး ထိတွေ့တဲ့ ပလပ်စတစ်ကို လိုချင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားပါ၊ ဒီဇိုင်းက အများအားဖြင့် ဈေးကြီးတယ်။
ဘယ်လောက်သုံးနိုင်လဲ ဒါမှမဟုတ် သုံးစွဲဖို့ ဆန္ဒရှိလား။
အဆုံးတွင်၊ ၎င်းသည် မည်သည့်လက်ပ်တော့ကိုဝယ်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်သောအခါတွင် ၎င်းသည် သင်၏ပင်မဘာရိုမီတာဖြစ်သင့်သည်၊ သင်သည် တတ်နိုင်သည်ထက် ပိုမသုံးသင့်ပါ။ သင့်ဘတ်ဂျက်သည် သင်ဝယ်ယူသည့် လက်ပ်တော့အမျိုးအစားကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
စျေးသက်သာတဲ့ Laptop ကိုရှာနေလား။ ဘယ်လောက်သုံးချင်လဲ ပြောပြပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကို ပြသသည်။
* စျေးနှုန်းပြောင်းလဲရန် slider ကိုရွှေ့ပါ။
ငါတို့ ဘာကို တန်ဖိုးထားခဲ့ကြသလဲ။
အဲဒါကို သင်သဘောမပေါက်ဖူးပေမယ့် လက်တော့ပ်ဟာ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ ဟန်ဆောင်လက်နှိပ်စက်ထက် အနည်းငယ်သာလွန်ပေမယ့် လက်တော့ပ်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ အနှစ် 30 ကြာအောင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ ရိုးရာဒက်စတော့ကွန်ပြူတာများသည် ကွန်ပြူတာ ပါဝါ၊ သိုလှောင်မှုပမာဏ ပိုများပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော မော်နီတာများကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ အလယ်ပိုင်းတွင် ဒက်စတော့ကွန်ပြူတာရှိခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း အချို့သောမိသားစုများသည် လက်ပ်တော့တစ်လုံးရှိခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို စတင်မြင်လာကြသည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ အင်တာနက်သည် dial-up modem မှကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွင်ရှိသော wireless routers များအထိပြောင်းလဲလာပြီး၊ တဆက်တည်းတွင်၊ လက်တော့ပ်များသည် ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူ ရွေ့လျားရန် လိုအပ်သော အသုံးပြုသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။. တစ်ချိန်က စီးပွားရေးသမားများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စစ်တပ်အတွက် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းသည် လက်ပ်တော့တစ်လုံး၏ အဓိကတန်ဖိုးဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုဝယ်ရမည်ကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ ၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကို ဂရုပြုသင့်သည်။၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာနှင့်၎င်း၏မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ။ ခေတ်မီလက်ပ်တော့များသည် အဟောင်းများကဲ့သို့ အလေးချိန်9ကီလိုထက် မပိုတော့သော်လည်း 2.72 ကီလို မော်ဒယ်နှင့် 1.84 အကြား ကွာခြားချက်ကို သင် သတိပြုမိနိုင်သေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင့်လက်ပ်တော့ကို စာသင်ခန်းသို့ ယူဆောင်ရန် စီစဉ်ပါက ၎င်းကို ကျောပိုးအိတ် သို့မဟုတ် အိတ်တစ်ခုအတွင်း သယ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သေးငယ်ပေါ့ပါးသော မော်ဒယ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာပေါက် သဘောကျမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် အသံအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တေးဂီတအဖွဲ့၏ တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲကို အသံသွင်းနေပါက၊ သင့်ကွန်ပျူတာကို တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းထက်စေရန် သင်တောင်းဆိုရမည့်အရာဖြစ်သည်။
Laptop အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။ အခြေခံလက်ပ်တော့တစ်လုံးအတွက် ယူရို ရာဂဏန်း သို့မဟုတ် ထောင်ပေါင်းများစွာသော တန်ဖိုးကြီး ဂိမ်းလက်ပ်တော့တစ်လုံးတွင် သုံးနိုင်သည်။ အချို့သောအားဖြင့် သင်သည် အင်တာနက်အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်များကိုသာ ရေးသားနိုင်သော်လည်း အချို့မှာ ပြဿနာမရှိဘဲ ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းပရိုဂရမ်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်သော လက်ပ်တော့အမျိုးအစားသည် သင်လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားသည့် အလုပ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သင့်သည်။ အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။ ရုပ်ရှင်တွေ ဒါမှမဟုတ် သင်အကြိုက်ဆုံး တီဗီရှိုးတွေ ကြည့်ချင်ပါသလား။ သင်သည် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သူ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို နှစ်သက်ပါသလား။ ဤလက်ပ်တော့ နှိုင်းယှဉ်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်ရှိ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်များကို အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာလိုပါက၊ လက်ပ်တော့များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကိုဖတ်နိုင်သည်။
ဒီနှိုင်းယှဉ်မှုမှာ အကောင်းဆုံး လက်ပ်တော့က ဘာလဲ။
ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေက မရိုးရှင်းပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ စားပွဲမှာ တင်ထားတဲ့ လက်ပ်တော့တွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံး လက်ပ်တော့သည် သင်ရှာဖွေနေသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ကိုက်ညီရန် မလိုအပ်ပါ။
နေရာတိုင်းနှင့် ခရီးသွားရန် စျေးကွက်ရှိ အပေါ့ပါးဆုံး လက်ပ်တော့ကို သင်ရှာနေသော်လည်း အခြားအသုံးပြုသူသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ရှာဖွေနေပေမည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ပ်တော့ နှိုင်းယှဉ်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ အရည်အသွေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပိုင်းတစ်ခုစီရှိ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်ကို လောင်းကစား ပရိသတ်အားလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
ဘယ်ကွန်ပြူတာကို ဝယ်ရမှန်းမသိရင် ကျွန်တော်တို့ကို comment ပေးခဲ့ပါ ၊ သင့်လိုအပ်ချက်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်အောင် ကူညီပေးမှာပါ။
သင့်အတွက် စံပြလက်တော့ပ်သည် သင့်လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်ပါလိမ့်မည်။မင်းဘာအတွက်သုံးမလဲ။ ဤအကြောင်းကြောင့် စာရင်းကို "အရည်အသွေး" ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ စျေးနှုန်းဖြင့် မှာထားခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကြိုးကြားကြိုးကြားအသုံးပြုရန် လက်ပ်တော့တစ်လုံးကို ရှာဖွေနေပါက (ဥပမာ သင့်အီးမေးလ်ကို စစ်ဆေးရန်၊ ဝဘ်ဆိုက်ကြည့်ရှုရန်၊ သင့်လူမှုကွန်ရက်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်၊ ဓာတ်ပုံများကို တည်းဖြတ်ရန်၊ Netflix ကို ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် သင်၏အလုပ်အချို့ကို Microsoft Office သို့မဟုတ် Google Docs နှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့၊ Chromebooks နှင့် ပတ်သက်၍ အလေးမထားပါနှင့်။ ) Chromebook ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ အပေါ်က သူတွေကို ကြည့်ပါ။ ဤလမ်းညွှန်မှ အကယ်၍ သင်သည် Windows လက်ပ်တော့တစ်လုံးကို ဝယ်ယူရန် တောင်းဆိုနေပါက သို့မဟုတ် သင်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အရာတစ်ခု လိုအပ်ပါက၊ အစပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသည့် ကွန်ပျူတာများကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးထဲမှာပဲ ငွေတန်ဖိုးအရှိဆုံးတွေကို သင်တွေ့လိမ့်မယ်။ လမ်းကြောင်းပြမီနူးကို အသုံးပြု၍ ဝဘ်တစ်ဝိုက်ကို အနည်းငယ်ကြည့်လျှင် သင်ဝယ်လိုသော လက်ပ်တော့အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့် ပိုမိုတိကျသော ဆောင်းပါးများ ပါရှိသည်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ အကောင်းဆုံး ဂိမ်းလက်ပ်တော့များ (ဂိမ်းဆော့ရန်) သို့မဟုတ် အလုပ်အတွက် အကောင်းဆုံး လက်ပ်တော့ စသည်တို့ကို သင်တွေ့မြင်လိုပေမည်။
စာရင်းကနေမြင်နိုင်သလို၊ ငါမင်းကိုရှင်းရှင်းပြောလိမ့်မယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ လက်ပ်တော့အားလုံးသည် Windows ကွန်ပျူတာများဖြစ်သည်။. တရားမျှတစွာပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်အမုန်းဆုံးသော Windows မော်ဒယ်များကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ Windows လက်တော့ပ်တွေက မကောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် တူညီတဲ့အလုပ်တွေအတွက် သုံးလို့ရတဲ့ Chromebook ကို ကျွန်တော်သုံးလေ့ရှိပြီး ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ သူတို့က ပိုစျေးသက်သာတယ် (မြင်ရတဲ့အတိုင်း)။ Apple Macbook များသည် ဤလမ်းညွှန်တွင် နေရာမရှိကြောင်း 🙂
1.1 စျေးပေါသော လက်ပ်တော့များအတွက် ယနေ့ လျှော့စျေးများ
1.2.1 Laptop စျေးနှုန်းအလိုက်
1.2.2 ပရိုဆက်ဆာအားဖြင့် လက်တော့ပ်များ
1.2.3 Laptop အမျိုးအစားအလိုက်
1.2.4 အမှတ်တံဆိပ်အလိုက် လက်ပ်တော့များ
1.2.5 မျက်နှာပြင်အလိုက် လက်တော့ပ်များ
1.2.6 လက်ပ်တော့ကို ပေးချင်တာ သုံးရတာ အလိုက်
1.3 2021 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံးစျေးသက်သာသော လက်ပ်တော့များ
1.3.3 ASUS VivoBook 15,6 လက်မ HD
1.3.4 HP က 14
1.4 သူတို့ရဲ့ အသုံးပြုမှုအလိုက် အကောင်းဆုံး ဈေးသက်သာတဲ့ Laptop တွေပါ။
1.6 လက်တော့ပ်များ နှိုင်းယှဉ်မှု- နောက်ဆုံးရလဒ်
1.7 Laptop အမျိုးအစားများ
1.7.2 ဂိမ်းဆော့ရန် လက်ပ်တော့များ
1.7.3 ကျောင်းသားများနှင့် အလုပ်အတွက် လက်တော့ပ်များ
1.7.5 နှစ်ယောက်တွဲ လက်တော့ပ်များ (hybrids)
1.7.7 အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် လက်ပ်တော့များ
1.7.8 Chromebooks သည်
1.7.9 Netbook များ
1.8 သေးသေးလား အကြီးလား ?
1.9 မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များကို ရှာဖွေသင့်သနည်း။
1.10 မဝယ်ခင်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးရမယ့် မေးခွန်းတွေပါ။
1.10.1 Laptop ကို ဘာအတွက် အဓိက သုံးမလဲ။
1.10.2 ဒီဇိုင်းကို သင်ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်လဲ။
1.10.3 ဘယ်လောက်သုံးနိုင်လဲ ဒါမှမဟုတ် သုံးစွဲဖို့ ဆန္ဒရှိလား။
1.11 ငါတို့ ဘာကို တန်ဖိုးထားခဲ့ကြသလဲ။
1.12 ဒီနှိုင်းယှဉ်မှုမှာ အကောင်းဆုံး လက်ပ်တော့က ဘာလဲ။
Black Friday လက်ပ်တော့များ
Black Friday Gaming Laptop များ
Cyber ​​Monday လက်ပ်တော့များ
စျေးပေါသောလက်ပ်တော့များ 2022 - သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ကွတ်ကီးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ - Contacto